Fanavaozana ny fiarovana ny macOS High Sierra 10.13.4 | Avy amin'ny mac aho
Vao namoaka fanavaozana fiarovana vaovao ho an'ny mpampiasa rehetra i Apple izay nametraka macOS High Sierra 10.13.4, ary ity fanavaozana ity dia manamboatra bug ary manatsara ny filaminan'ny rafitra. Amin'ity tranga ity dia ny isa 2018-001 ary azo atokana ho an'ny rehetra.
Mba hametrahana an'ity kinova vaovao ity dia ny sisa ataontsika midira amin'ny Mac App Store ary kitiho ny kiheba fanavaozana, ao no ahitantsika ny misy an'ity kinova vaovao ity. Raha vantany vao alaina sy apetraka dia tsy maintsy hamerina ny solosaina isika, noho izany ny famitana ny asa alohan'ny fanavaozana dia zava-dehibe.
Fanavaozana ny fiarovana
Navoaka ity fanavaozana ny filaminana ity iray volana taorian'ny nahatongavan'ilay kinova farany an'ny macOS High Sierra 10.13.4, saingy toa tsy nisy lesoka miavaka tamin'ity kinova ity izahay. Any Apple dia efa mampitandrina an'izany izy ireo aza aseho ny olana voavaha amin'ny fanavaozana ny fiarovana:
Mba hiarovana ny mpanjifanay dia tsy hanambara, tsy hifanakalo hevitra na hanamafy ny olana ara-piarovana i Apple mandra-pisian'ny fanadihadiana sy ny fanitsiana na ny kinova ilaina. Ny kinova farany dia voatanisa amin'ity antontan-taratasy ity.
Na izany na tsy izany, ny orinasa dia mandefa ny kinova vaovao noho ny bibikely ary ny zavatra tsy maintsy ataon'ny mpampiasa dia ny mametraka azy io faran'izay haingana hanitsiana ny olana. Isaky ny misy famoahana ny fiarovana dia zava-dehibe ny fanavaozana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » High Sierra macOS » Fanavaozana ny fiarovana an'ny macOS High Sierra 10.13.4
Bunion dia hoy izy:
Eny, tsy voavaha ny olako amin'ny fifandraisana Wi-Fi, tohizako amin'ilay tantara fa tsy maintsy esoriko ny Wi-Fi ary avy eo ampifandraisiko amin'ny masiniko roa, ary matahotra aho fa hamono ny Watch, izaho apetraho amin'ny maody fiaramanidina hatory izy ary manondro baolina.
Mamaly an'i Bunion
Martinhut dia hoy izy:
Salama daholo aho rookie eto. Lahatsoratra tsara! Mstr! Tiavo ny tantaranao!
Valiny tamin'i Martinhut
Misedra olana aho amin'ny fanavaozana izany. (misaotra ny fanampiana azonao omena ahy)
Manokatra ny appstore aho ary manavao, mandeha mainty ny écran nefa tsy tapitra ny fanidiana azy, mbola eo ilay cursor, azoko afindra, mila vonoiko ho azy ny mac mini ary rehefa miverina indray aho, ilay fanavaozana "tsy misy fanavaozana "mipoitra ao amin'ny appstore.
Mac mini faran'ny taona 2012 6,1 (I5, 2,5 GHz)
Haavo ambony 10.13.4
ssd disk 256 gb APFS SATA "zava-dehibe"
Toy izany koa no mahazo ahy toa an'i Ricardo, manana olana aho amin'ny fanavaozana izany. (misaotra ny fanampiana azonao omena ahy)
Manokatra ny appstore aho ary manavao, mandeha mainty ny écran nefa tsy tapitra ny fanidiana azy, mbola eo ilay cursor azoko afindra, mila vonoiko tanana ny mac mini ary rehefa averiko indray ilay fanavaozana "tsy manavao" dia miseho ao amin'ny appstore.
Manana olana mitovy amin'i Juan Carlos sy Ricardo aho… misy manana vahaolana ve?
Ahoana ny fomba hanokafana haingana ny rohy avy amin'ny Spotlight